Dr. Basudev Krishna Shastri
Dr. Basudev Krishna Shastri isaReknown Astrologer from Nepal. He used to beapopular TV program Kundalini presenter in Kantipur Television Network. He has got the doctorate degree in Astrology.
Kundali Matching (China Milaune)
* all feilds are required to successfully submit
Birth date and place of Bride
Birth date and place of Groom
Tuesday, 27 December 2016 09:05
Relation between astrology and Vastu
There is three kind of power consists inside the human body explained in Vedic science - spiritual power, mental power and physical power. We need the knowledge of best practices in Vedic science to bestows the human power in our life-cycle.
Wednesday, 21 December 2016 21:42
शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रशस्त योग रहेको छ । नयाँ योजनाहरु बन्नेछन् । राजनीतिक वादविवाद बढ्नेछ । मानसिक खिन्नता बढ्ने देखिन्छ । कूटनीतिक प्रयासहरु सफल हुनेछन् । सामाजिक क्षेत्रमा मान सम्मान प्राप्ति हुनेछ । चिसोबाट सावधान रहनुहोला । व्यापार व्यवसायमा सफलता पाइनेछ ।
Published in Daily Horoscope - NE
Saturday, 24 December 2016 01:25
महत्वपूर्ण कार्यमा सफलता मिल्नाले मनमा हर्ष तथा कार्यमा उत्साह बढ्नेछ । पठनपाठनमा सुधार आउनेछ । आम्दानीका स्रोतहरु फेला पर्नेछन् । धार्मिक कार्यमा सहभागिताको अवसर मिल्नेछ । पशु चौपायाबाट लाभ मिल्नेछ । अचल सम्पत्तिमा विवाद उत्पन्न हुनेछ ।
Friday, 23 December 2016 08:03
मनमा उत्साह र हर्ष बढ्ने देखिन्छ । गरेका कार्यहरुबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । राजनैतिक कार्यमा अल्झनको सामना गरिनेछ । प्रशासकको सहयोगले अल्झिएका कार्य सुचारु हुनेछन् । वैदेशिक यात्राको योग रहेको छ । सामाजिक कार्यको नेतृत्व गरिने छ ।
Sunday, 25 December 2016 11:46
औषधी तथा जडी बुटीको कार्य गर्ने अवसर प्राप्त होला । कूटनीतिक प्रयासबाट थालिएका कार्यहरु सुचारु हुनेछन् । बोलीको प्रभाव बढ्नेछ । सामाजिक दायित्वबोधबाट विचलित हुने सम्भावना रहेको छ । वाणीको प्रभाव रहनेछ । आफन्तको सहयोगले बिशिष्ट कार्यको थालनी गरिने छ ।
Saturday, 24 December 2016 06:57
अचल सम्पत्तिको क्षय हुने देखिन्छ । आफन्तको सहयोग मिल्नेछ । वाणीको प्रभाव बढ्नेछ । शुभ कार्य एवं धार्मिक यात्रामा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ । शारीरिक परिश्रम बढ्ने देखिन्छ । कार्यमा ढिला सुस्ती र उल्झन व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । आय आर्जनमा सन्तुष्टि मिल्ने छ ।
Friday, 23 December 2016 19:26
व्यापार वयवसायमा सामान्य छ । स्वासथ्यमा सामान्य बाधा पर्न सक्नेछ । राजनीतिक विचलनको स्थिति रहनेछ । धार्मिक तथा सामाजिक कार्यमा संलग्न हुने अवसर मिल्नेछ । मुहारमा कान्ति छाउनेछ । दैनिक कार्यमा सहयोग प्राप्त होला । प्रसस्त लाभ लिन नसकिएला ।
Saturday, 24 December 2016 01:09
मान्यजनबाट सहयोगको अपेक्षा गर्दा राम्रै होला । लेखन कला र साहित्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । गीतसंगीतमा रुचि बढ्नेछ । शैक्षिक प्रतिस्पर्धामा सफलता हात लाग्नेछ । गुप्त खजाना तथा धातुजन्य व्यवसायबाट लाभ प्राप्त हुनेछ । प्रेमी प्रेमिकाबीचको सम्बन्ध राम्रो रहला ।
Sunday, 25 December 2016 05:53
समाजका विशिष्ट व्यक्तिहरुसँगको सम्बन्धले कार्य सफलता मिल्नेछ । वैदेशिक यात्राको योग रहेको छ । राज्यबाट मान सम्मान पाइएला । पतिपत्नीबीचको सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ । मनमा उत्साह र हर्ष बढ्ने देखिन्छ । नयाँ सामानको खरिद हुनेछ । पेशा व्यवसायमा लाभ मिल्नेछ ।